Inotakurika Kubata Magnetic Anosimudza eMeteti Mapepa
Portable Permanent Magnetic Ruoko Rinosimudza reTransshi ...
Yakagadzirwa Bushing Magnet ye Precast Concrete Embedde ...
Kona Magnet ekubatanidza Magnetic Shuttering Sys ...
Kubata Magnets Ekuparadzira Anchors Positioning & ...
1.3T, 2.5T, 5T, 10T Simbi Yakagadzika Yekare Magnet Kune An ...
0.5m Kureba Magnetic Shuttering Mbiri Sisitimu
2100KG, 2500KG Kudhonza Force Precast Concrete Magnet ...
1350KG, 1500KG Rudzi rweMagnetic Formwork System
900KG, 1Ton Bhokisi magineti e Precast Tilting Tafura Mo ...
Liquid Trap Magnets ane Flangle Kubatanidza Rudzi
Kubata Magnets ePilot Manera
Magnetic Anokwezva Maturusi
Round Magnetic Catcher Tora-kumusoro Maturusi
Rectangular Magnetic Catcher yeFerrous Kudzorera
Simba Magnetic Pfuti Bata
Zviri nyore kuisa uye kutora iro rinobva rinosimudza kubva kune ferrous chinhu ine ON / OFF kusunda mubato. Hapana magetsi ekuwedzera kana rimwe simba rinodiwa kutyaira iri remagineti chishandiso.
Anotakurika Permanent Magnetic Ruoko Anosimudza yeTransshipping Metal Plates
Yekusingaperi Magnetic Handlifter yakanyatso kukonzera kushandiswa kwekuturika simbi mahwendefa mukugadzirwa kwemusangano, kunyanya machira matete pamwe nezvikamu zvakapinza zvinocheka kana zvine mafuta. Iyo yakasanganiswa zvachose magineti system inogona kupa 50KG yakarongwa yekusimudza kugona ne 300KG Max kudhonza simba.
Neodymium Ring Magnet neZn kuisirwa maLoudspeaker Kunyorera, Masipika Magineti
Kuti uwane kurira kwakanaka kubva kune mutauri, magineti akasimba, neodymium magineti, anoshandiswa zvakanyanya. Neodymium mhete magineti ine yakanyanya musango simba yechero yechigarire magineti inozivikanwa.Ma loudspeaker manfuacturers inoishandisa kukodzera maspika ehukuru hwakasiyana uye kuti uwane huwandu hwetoni hunhu.
Neodymium Bar Magnet ine Countersunk Makomba
Neodymium Countersunk Bar Magnet inoratidzira kukwirira kusagadzikana, yakakwira max inoramba ichishanda tembiricha, uye yakanakisa ngura kuramba. Makomba ekuverengesa anoshandiswa kuroverera zvidzidzo.
ABS Rubber Yakavakirwa Round Magonyeti ePositioning Akabatanidzwa PVC Pipe pane Simbi Fomu
ABS Rubber Yakavakirwa Round Magnet inogona kugadzirisa uye kumisikidza Yakabatanidzwa PVC pombi nenzira kwayo uye yakasimba pane yesimbi formwork. Inofananidzwa nesimbi yemagineti yekugadzirisa ndiro, iyo ABS rabha goko inochinjika kuti ienderane nepombi yemukati madhaimita zvakanyanya. Hapana chinofamba chinetso uye nyore kubvisa.
Yakagadziriswa Bushing Magnet yePrecast Konkrete Yakasimudzwa Kusimudza Chigadziko
Yakagadziriswa Bushing Magnet ine simba rine simba rekunamatira simba kune yakasimudzwa maseti ekusimudza mune precast kongiri yezvinhu kugadzirwa, kutora nzvimbo kweyekare-fesheni yekutenderera uye yekubatanidza nzira yekubatanidza. Iyo simba iri pakati pe50kg kusvika 200kgs ine akasiyana akasarudzika tambo dhayamita.
Corner Magnet yeKubatanidza Magnetic Shuttering Systems kana Simbi Mould
Makona emakona anoshandiswa zvakakwana kune maviri akatwasuka "L" akaumbwa simbi mafuru kana maviri magineti ekuvhara maprofile pakutendeuka. Iwo ekuwedzera feets anosarudzika kusimudzira iyo inomira pakati pekona magnt uye nesimbi furu.
Simbi Lever Bar yekuburitsa Push / Dhonza Bhatani Magnets
Simbi Lever Bar inowirirana chishongedzo chekuburitsa iyo Push / dhonza bhatani magineti kana ichida kuifambisa. Iyo inogadzirwa neyepamusoro giredhi chubhu uye simbi ndiro neyakaiswa chisimbiso uye nzira yekutengesa.
Kubata Magnets Ekuparadzira Anchors Positioning & Kugadzirisa
Iwo akabata magineti anoshanda ekumisikidza uye kugadzirisa akapararira ekusimudza anchors nesimbi formwork. Tsvimbo mbiri dzakakorwa dzinoiswa mukati memagineti ndiro muviri, kuita kuti irabha yepasi ive nyore pakuisa.
Magnetic Plate Holder Ine Chinoshanduka Thread-Pin yekugadzirisa Socket Magnet D65x10mm
Iwo magineti ndiro ane ekugadzira anogadzirwa kuisa akaiswa machira masoketi, sleeve kukongiri pani mune yesimbi formwork. Iwo magineti ane stromg zvakanyanya adhesion zvimiro zvinokonzeresa mukushanda, kwenguva refu mhinduro.
1.3T, 2.5T, 5T, 10T Simbi Yakagadzika Yakare Magineti Yeiyo Anchor Kugadzirisa
Simbi Yakagadzika Yekare Magineti yakagadzirirwa kuitisa kusimudza maanchors padivi muforoma, pachinzvimbo chetsika yerabha zororo raimbove kumisidzana. Iyo semi-bhora chimiro uye yepakati srew gomba zvinoita kuti zvive nyore kutora kubva kukongiri pani kana ichiputsika.
Simbi Magnetic Triangle Chamfer L10x10, 15 × 15, 20 × 20, 25x25mm
Simbi Magnetic Triangle Chamfer yakanyatsopa inopa nekukurumidza uye kwakaringana kuisirwa kwekugadzira beveled micheto pamakona uye kumeso kwe precast kongiri madziro emadziro mune yesimbi formwork yekuvaka.